အော်တိုမေးရှင်း - ဝီကီပီးဒီးယား
(အော်​တို​မေး​ရှင်း မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
အော်တိုမေးရှင်း (အင်္ဂလိပ်: automation) သို့မဟုတ် အလိုအလျောက် ထိန်းချုပ်ခြင်း ဆိုသည်မှာ အမျိုးမျိုးသော ထိန်းချုပ်မှုစနစ်များကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် လူတို့၏ အားစိုက်ထုတ်မှုကို အနည်းဆုံး အသုံးချခြင်း သို့မဟုတ် လျော့ချခြင်းကို ခေါ်ဆိုသည်။ စက်ကိရိယာများ၊ စက်ရုံများ အတွင်းရှိ လုပ်ငန်းဆောင်တာများ၊ ဘွိုင်လာများ၊ တယ်လီဖုန်း ကွန်ယက်များကို ချုပ်ထိန်းခြင်းများ၊ သင်္ဘောများ နှင့် လေယာဉ်ပျံများကို မောင်းနှင်ခြင်း နှင့် ထိန်းကွပ်ခြင်းများ နှင့် အခြားသော လုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင် အသုံးပြုလေ့ ရှိသည်။ အချို့သော လုပ်ငန်းဆောင်တာများမှာ လုံးဝ အလိုအလျောက် အလုပ်လုပ်သည် အထိ ပြုလုပ်ထားကြသည်။ အော်တိုမေးရှင်း၏ အကြီးဆုံးသော အားသာချက်မှာ လုပ်သားအင်အားကို လျော့ချနိုင်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ စွမ်းအင် နှင့် ကုန်ကြမ်းများကို ချွေတာနိုင်ရန် အတွက် လည်း အသုံးပြုနိုင်သည်သာမက အရည်အသွေးကို တိုးမြှင့်ခြင်း၊ ပိုမို တိကျစေခြင်း တို့အတွက်လည်း အသုံးပြုလေ့ ရှိကြသည်။
အော်တိုမေးရှင်း ဟူသော ဝေါဟာရမှာ ယခင် အော်တိုမက်တစ် ဆိုသော ဝေါဟာရကို အခြေခံပြီး ဂျင်နရယ် မော်တော်ကား ကုမ္ပဏီမှ အော်တိုမေးရှင်း ဌာနကို တည်ထောင်သည့် ၁၉၄၇ ခုနှစ် အထိ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးမပြုကြပေ။ ထိုအချိန်မှာ စက်ရုံအလုပ်ရုံများတွင် ၁၉၃၀ ပြည့်လွန်နှစ်များက စတင် မိတ်ဆက်ခဲ့သော လက်ရှိအခြေအနေကို ပြန်လည် အချက်ပေးနိုင်သည့် ထိန်းချုပ်မှု စနစ်များ စတင် အသုံးပြုလာသည့် အချိန်ပင် ဖြစ်သည်။
အော်တိုမေးရှင်း လုပ်ငန်းကို စက်မှုနည်း၊ ဟိုက်ဒရောလစ်နည်း၊ နျူမက်တစ်နည်း၊ လျှပ်စစ်နည်း၊ အီလက်ထရွန်းနစ်နည်း၊ ကွန်ပျူတာ နည်းတို့ဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး ပုံမှန်အားဖြင့် နည်းလမ်းများကို ပေါင်းစပ်အသုံးပြုလေ့ ရှိကြသည်။ ရှုပ်ထွေးသော စနစ်များ ဖြစ်သည် ခေတ်သစ် စက်ရုံများ၊ လေယာဉ်ပျံများ နှင့် သင်္ဘောများတွင် ထိုနည်းလမ်းများကို ပေါင်းစပ် အသုံးပြုလေ့ ရှိကြသည်။
၄ အသုံးပြုသော လုပ်ငန်းများ
အော်တိုမေးရှင်းဟူသော ဝေါဟာရကို စတင်သုံးစွဲသူမှာအမေရိကန် ဖို့ဒ်မော်တော်ကား ကုမ္ပဏီမှ ဒီအက်စဟာဒါဆိုသူ ဖြစ်သည်။ ၁၉၄၆ ခုနှစ်တွင် ဖို့ဒ်ကုမ္ပဏီသည်မော်တော်ကား အစိတ်အပိုင်းများကို အ လိုအလျောက် ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိသည့် စက်များကို တီထွင်ခဲ့သည်။ယင်းစက်များကို အော်တိုမေးရှင်း စက်ဟု အမည်ပေးခဲ့သည်။
အော်တိုမေးရှင်းစနစ်အရ စက်ကိရိယာအပိုင်းများ ထုတ်လုပ်ရာ၌ ကွန်ပျူတာစက်များ၏ အကူအညီ ကို ယူ၍ ထုတ်လုပ်ကြသည်။ အခြားကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများ၌လည်း အော်တိုမေးရှင်းစနစ်ကို သုံးကြသည်။
လက်ဖြင့် ထိန်းချုပ်ညွှန်ကြား လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရာ၌ လူကစက်ကိရိယာ တန်ဆာပလာတို့ကို ဂရု ဓမ္မပြု၍ ကြည့်ရှုစောင့်ကြပ်ပေးရ၏။ စက်ဖြင့် ထိန်းချုပ်သောအခါ လူ့ပယောဂမပါဘဲကိစ္စပြီးနိုင်မည်။ အလို အလျောက်ထိန်းချုပ်သော စနစ်ကို ဥဒါဟရုဏ်အားဖြင့် ပြဆိုရလျှင် လျှပ်စစ်မီးဖိုကိုပြဆိုရလိမ့်မည်။ လျှပ် စစ်မီးဖိုစနစ်၌ မီးဖိုသည်ချက်ပြုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် အဆင့်ဆင့်ကို ပြုပြင်စီမံရသောအပိုင်းဖြစ်သည်။
အာရုံခံ ကိရိယာကား အပူချိန်ညှိကိရိယာ ဖြစ်သည်။ ထိန်းချုပ်ကရိယာကား အဖွင့်အပိတ်ခလုတ်ပင် ဖြစ်သည်။ ဤ လုပ်ငန်း၌ အလိုအလျောက် ဆောင်ရွက်နိုင်သောအစီအစဉ်ရှိ၏။ အပူချိန်ညှိကိရိယာက လိုအပ်သောအပူဒီဂရီ ထက်ကျော်လွန်ပြီဟုသိအောင် အာရုံကိုခံယူသည်။ ဤသို့အာရုံခံယူ၍ သိရသောအသိကို ခလုတ်ထံသို့သတင်း ပေးပို့သည်။ ထိုအခါ ခလုတ်ကမီးဖိုကိုပိတ်လိုက်၏။ အပူချိန်သည် လိုအပ်သည့် ဒီဂရီသို့မရောက်ပဲကျသွား ပြန်လျှင် အထက်ပါနည်းအတိုင်း အပူချိန်ညှိကရိယာက အကြောင်းကြားသဖြင့် ခလုတ်ပြန်၍ ပွင့်လာသည်။
ဤနည်းဖြင့် အပူချိန်သည် လျှပ်စစ်မီးဖိုသုံးစွဲမှုအလိုရှိသောဒီဂရီတွင် တစ်သမတ်တည်း တည်လေသည်။လျှပ် စစ်မီးဖိုထက် ပို၍နူးညံ့သိမ်မွေ့သော အလိုအလျောက်စက်တို့၌အပူချိန်ကို ခလုတ်ဖြင့် ညှိပေးရန်ပင် မလို တော့ချေ။ မိမိ ဘာသာမိမိ အပူချိန်ကို တစ်သမတ်တည်းထား၍ ပေးနိုင်သည်။
အလိုအလျောက်စက်များကို စက်ကိရိယာတန်ဆာပလာ ထုတ်လုပ်ရေး၌ အသုံးပြုနိုင်သည်။လေယာဉ် ပျံနှင့်ဆိုင်သော တန်ဆာပလာတို့ကိုထုတ်လုပ်ရာ၌ ကွန်ပျူတာစက်တို့၏ အကူအညီကိုယူ၍ ထုတ်လုပ်လျက် ရှိ၏။ မော်တော်ကားများကိုထုတ်လုပ်ရာ၌ စုပေါင်းတပ်ဆင်မှုစနစ်ကို အသုံးပြုလျက်ရှိရာ ယင်းအလို့ငှာအော် တိုမေးရှင်း နည်းနိသျတို့သည် အလွန်အသုံးဝင်သည်။ အခြားစက်မှု လုပ်ငန်းများ၊ မီးရထားလုပ်ငန်း၊လေကြောင်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း၊ သတ္တုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်း၊ အထည်အလိပ် ရက်လုပ်ခြင်း၊ ဆေးသုတ် ခြင်းလုပ်ငန်း၊ စက်ကိရိယာတို့ကို စစ်ဆေးစမ်းသပ်ခြင်းလုပ်ငန်း၊စားနပ်ရိက္ခာ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစသည်တို့ တွင် အော်တိုမေးရှင်းစနစ်ကို သုံးသည်။ ထိုမျှမကသေး၊ လက်လီရောင်း ဝယ်ရေးစနစ်တွင် ကုန်ပစ္စည်းစာရင်း၊ လက်ကျန်စာရင်း၊စာတိုက်မှမှာယူသော ကုန်ပစ္စည်းစာရင်း၊ အရောင်းစာရင်းစသည်တို့ကို ထားသိုသောကိစ္စ များ၌၎င်း၊ ကုန်စည်သိုလှောင်ရုံစနစ်တွင် လူမပါဘဲ လျှပ်စစ်ဖြင့် အလိုအလျောက်ခုတ် မောင်းသောပို့ဆောင် ရေးယာဉ်များစသည်တို့ကိုထိန်းသိမ်းထားရှိသော ကိစ္စများ၌၎င်း အော်တိုမေးရှင်းစနစ်ကို သုံးစွဲလျက်ရှိနေကြ သည်။ 
↑ Rifkin, Jeremy (1995). The End of Work: The Decline of the Global Labor Force and the Dawn of the Post-Market Era. Putnam Publishing Group, 66, 75. ISBN 0-87477-779-8။
↑ Bennett, S. (1993). A History of Control Engineering 1930-1955. London: Peter Peregrinus Ltd. On behalf of the Institution of Electrical Engineers. ISBN 0-86341-280-7။
↑ စွယ်စုံကျမ်းနှစ်ချုပ်၊ ၁၉၇၈
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အော်တိုမေးရှင်း&oldid=497755" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၉၊ ၀၂:၀၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။